musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Monster Hurricane Ida paTrack yeNew Orleans Dunhu
Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuparadza kwenzvimbo neHurricane Ida kuri pedyo nhasi kuSouth Louisiana, padhuze neNew Orleans muUnited States.
Dutu rechikara, pamwe rakasimba chose kwamakore zana nemakumi mashanu rinogona kukura kuita chikamu chechishanu dutu, uye kuti ubatwe nedutu iri hazvimisike.
Hurricane Ida ishoma neHurricane 5 Dutu rinotarisirwa kurova kuSouth East Louisiane Coast neKentucky, USA kuma2pm nguva dzemuno. Mhedzisiro yakaipisisa inotarisirwa kunge ingangoita mamaira makumi mashanu kubva kuNew Orleans.
Iyi inogona kunge iri dutu rekupedzisira rakanyorwa muUnited States kweanopfuura makore zana nemakumi mashanu
Vanhu vasina kubuda vanofanirwa kuziva nezvegungwa zita masaji e15ft, tornados kuwedzera kune 150+ mph dutu remhepo
Nenguva dza5 mangwanani, dutu iri rakanga richitowedzera kusimba.
Masuniti ese emunyika akamuka kuti vabatsire kana dutu rapfuura.
Zvipatara zvatova kazhinji zvinomhanya pahuwandu nekuda kwekukura kukuru kweCOVID-19 kuwedzera.
Parizvino, kumhanya kwemhepo kuri 150 mph, ingori mamaira manomwe kubva kuchikamu chechishanu dutu.
Vatauri veindasitiri yehotera muNew Orleans vakati mahotera akagadzirira kuchengetedza vaenzi vakachengeteka.
Mahotera mazhinji anotengeswa muArkansas, Texas, Louisiana nevashanyi vanobva kuSouth Louisiana vachiedza kutiza dutu Ida.
Uku ndiko kuona hakuna munhu anoda kuona pane satellite. Ida, Chikamu chechina chikuru chamupupuri nemhepo ine simba yakawanda yazvino 4mph inoenderera ichisvika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLouisana. Ichi chinoramba chiri chakakomba, chinotyisa hupenyu mamiriro. Gara wakashongedzwa kuitira kugara uchigadzirisa. #mutemo #mswx pic.twitter.com/SMs227S3CH
Dutu rinotarisirwa kupfuura nekunanga pamusoro pemamwe mafekitori emakemikari. Izvi hazvina kumboitika kare uye zvinoshungurudza maererano nenyanzvi.
Ruzivo urwu rwuri rwe6 am yenguva yenguva:
Hurricane Ida Tropical Cyclone Update NWS National Hurricane Center Miami FL AL092021 600 AM CDT Sun Aug 29 2021 ... NOAA NDEGE INOSVIRA IDA STRONGER ... ... CHIKAMU CHINOTYANYA KUNYANYA 4 HURRICANE IDA INOTARISIRWA KUTI IVE NENGONI MUMASHURE ENDAI .. LODAYANA LATERI. Mishumo kubva kuAAAA Hurricane Hunter ndege inoratidza kuti mhepo dzakasimba dzakasimukira dzakawedzera kusvika padyo nemamirioni zana nemakumi mana (150 km / h) nemhepo yakakwira. Iyo yazvino shoma yepakati kumanikidza inofungidzirwa kubva kune yekuongorora ndege data ndeye 240 mb (935 mukati). Chiteshi cheNoaA C-MAN chakakwira paPilot's Station East padyo neSouthwest Pass, Louisiana, nguva pfupi yadarika yakashuma mhepo yakatsiga ye27.61 mph (82 km / h) uye mhepo kune 131 mph (107 km / h). Imwe NOAA yakakwidziridzwa chiteshi cheC-MAN kuSouthwest Pass nguva pfupi yadarika yakataura mhepo yakatsiga ye172 mph (77 km / h) uye nemhepo mhepo ye124 mph (93 km / h). Pfupiso ye150 AM CDT ... 600 UTC ... INFORMATION ------------------------------ ---------- NZVIMBO ... 1100N 28.3W ZVINENGE 89.4 MI ... 75 KM SSE YEMAZWI ISLE LOUISIANA ZVINENGE 120 MI ... 60 KM SSW YOMUROMO WEMISISISIPIPI RIVER MAXIMUM YAKASIMBISWA MHEPO ... 95 MPH ... 150 KM / H KUFAMBA KWAKAITIKA ... NW KANA 240 DEGREES PA 315 MPH ... 15 KM / H MINIMUM CENTRAL PRESSURE ... 24 MB ... 935 INCHES